Madaxweyne xaaf oo la kulmay Hay’addaha Caalamiga ah ee dhuusomareeb ka howl gala (Sawiro) – Radio Daljir
Madaxweyne xaaf oo la kulmay Hay’addaha Caalamiga ah ee dhuusomareeb ka howl gala (Sawiro)
Oktoobar 1, 2018 3:38 g 0
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Gelle xaaf ayaa Maanta Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda maamulka Galmudug ku qaabilay wafdi ka socday Hay’adda WFP.
Wafdiga ka socday Hay’adda WFP ayaa waxaa ay kormeer ku tageen xarumihii ay dagi lahaayeen Magaalada Dhuusamareeb oo dhawaan lagu la filaayo in halkaasi ay ka sameystaan xaruntooda ugu wayn ee Galmudug.
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Gelle xaaf oo kulan la qaatay wafdiga ayaa sheegay in dhawaan Hay’adda WFP ay xaruntooda ugu wayn Galmudug ka furan doonaan Magaalada Dhuusameeb ee Caasimadda maamulka Galmudug.
Sidoo kale waxaa uu sheegay Madaxweyne Xaaf in Wafdigan ka socday Hay’adda WFP maanta u yimaadeen Magaalada in ay sii indha indheeyaan halka ay dagi lahaayeen Dhuusamareeb.
Xiddigta Hollywood Ubax Maxamed iyo sidii ay magaceeda u nacday
Maxakamada Ciidamadda Qalabka Sida oo xukuno riday (dhegayso)